Factory Tour - Ningbo Sunshine Rubber And Plastic
PaHebhuroni Conveyor Belt
Fire nemishonga Conveyor Belt
Zvisingaperi Conveyor Belt
Mafuta nemishonga Conveyor Belt
Rabha vs. bhandi
Raw kumucheto V bhandi
motocyle mazino vs. bhandi
zvinoitika mazino vs. bhandi
Wakaputirwa V bhandi
motocyle vs. bhandi
Muzvarirwo vs. bhandi
Washing machine vs. bhandi
Auto Nguva Belt
Kwakachena hemp Auto Mat
W ith chinangwa " kukwikwidzana unhu hwakanaka uye kuva ne zvinhu uye " uye basa nheyo " tora vatengi 'kudiwa sezvo dzidziso ", ticharamba nemwoyo kupa vanokwanisa zvinhu uye basa zvakanaka dzokudya uye dzakawanda vatengi.
" Sikai Tsika, Kushumira Customer !" ndicho chinangwa isu kutevera. We nomwoyo tariro kuti vatengi zvose uchakusimbisa yakareba uye pamwe mose pamwe us.If uchida kuwana mamwe mashoko pamusoro vekwedu, Tapota taura nesu zvino!
T kushanda ruzivo mumunda atibatsira yakabva yanyatsobatana hukama hwakasimba vatengi uye vamwe vari mumhuri uye dzakawanda kumusika. Kwemakore, zvigadzirwa edu aivigirwa kunyika dzinopfuura 15 munyika uye zvave zvikuru kushandiswa vatengi.
With mabikirwo sezvo chinoumba, kuumba uye zvibereko yepamusoro zvigadzirwa maererano siyana zvinodiwa kumusika. With pfungwa iyi, kambani acharamba kukudziridza zvinhu dzakakwirira akawedzera tsika uye dzichimhanya kuvandudza zvinhu, uye achapa vatengi zhinji nezvakanakisisa zvinhu uye mabasa!
Kutora makirisito yokuti " kuva Musingavayemedzi ". Tichakurukura redound kukwira magariro kuti yepamusoro zvinhu uye basa rakanaka. Ticharamba kutanga kuita makwikwi dzakawanda kuva vomuzana kirasi akaigadzira chigadzirwa ichi munyika.
C ertainly, yemakwikwi mutengo, zvakakodzera pasuru uye nenguva hurukuro zvichabviswa nechokwadi sezvo paminiti vatengi 'zvirevo. Tinotarisira nomwoyo wose kuti kuvaka bhizimisi ukama nemi pahwaro tose tibatsirwe uye purofiti mune pedyo zvikuru ramangwana. Noushamwari nesu uye kuva yakananga cooperators edu.
W E vane makore anopfuura 10 aivigirwa ruzivo uye zvigadzirwa edu expored kunyika dzinopfuura 30 kumativi shoko. Tinogara abate basa tenet Client wokutanga, Quality kutanga mupfungwa dzedu, uye tiri yakaoma pamwe chigadzirwa unhu. Welcome kushanyira kwenyu!
P roducts vave aivigirwa kuna Asia, Mid-kumabvazuva, European uye Germany pamusika. Kambani yedu yave nguva kukwanisa dzifambirane zvigadzirwa kuita uye kuchengeteka kunochingura misika uye vanovavarira kuva pamusoro A pamusoro yakatsiga unhu uye basa nomwoyo wose. Kana uine ropafadzo kuita bhizimisi kambani yedu. tichaita Zvechokwadi nepatinogona napo kutsigira basa renyu China.
" Hwakanaka, basa Good " nguva dzose yedu tenet uye credo. Tinotora zvose zvavanogona kudzora unhu, pasuru, azoti nezvimwewo uye QC wedu kuongorora zvose panguva kubudisa uye napamberi zvacho. Tiri kuda kumisa refu mabhizimisi ukama nevaya vanotsvaka unhu dzakakwirira zvinhu uye basa rakanaka. Takaita akamisa yakafarikana rokutengesa samambure mhiri nyika dzokuEurope, North America, South of America, Middle East, Africa, East Asia countries.Please nesu zvino, uchawana zvedu nyanzvi ruzivo uye yepamusoro mamakisi achabatsirawo kuti renyu.
H onest chose vatengi vari vedu akumbira! -Kirasi yokutanga kushumira, hwakanakisisa, yakanakisisa mutengo uye uchitsanya hurukuro musi notibatsira! Ipai vatengi ose akanaka kushumira ari tenet yedu! Izvi zvinoita boka redu kuwana nyasha vatengi uye rutsigiro! Welcome pose vatengi titumirei Kubvunzisisa kutarira mberi kwako zvakanaka co-kushanda! Ndapota wobvunzisisa kwenyu zvakawanda kana kukumbira inotengeswa munyika dzakasarudzwa.
O kambani muUri chikuru zvigadzirwa zviri zvikuru kushandiswa munyika yose; 80% mishonga yedu aivigirwa kuUnited States, Japan, Europe uye zvimwe pamisika. Zvinhu zvose zvechokwadi welcome vakokwa kuuya kuzoshanyira fekitari yedu.
Ningbo mushana Rubber And Plastic Tech Co., Ltd.
takapinda Dubai rabha & plast ...
takapinda Russian mugodhi indasitiri, e ...
takapinda Hanover maindasitiri exhibi ...